मेडिकल क्षेत्रमा देखिएका विकृतिको अर्थशास्त्र | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण मेडिकल क्षेत्रमा देखिएका विकृतिको अर्थशास्त्र
लेख | दृष्टिकोण 110 views
मेडिकल क्षेत्रमा देखिएका विकृतिको अर्थशास्त्र
नेपालमा सरकारी अस्पतालहरूले दिने स्वास्थ्योपचार सुविधा राम्रो नभएकै कारण च्याउसरी निजी अस्पतालहरू खुलेका हुन् । काठमाडौं खाल्डोमा मात्र करीब सयको हाराहारीमा निजी अस्पताल छन् । सरकारी अस्पतालको सेवा भरपर्दो, गुणस्तरीय र लोभलाग्दो भइदिएको भए सम्भवतः यो क्षेत्रमा माफिया शब्दको आविष्कारै हुन्थेन । किनभने भूमाफियाको त जगजगी सुनिएकै हो, यता केही समयदेखि मेडिकल माफियाले पनि नेपाललाई जर्जर बनाउन थालेको देखिन्छ । यसको एक मात्र उदाहरण डा. गोविन्द केसीले पन्ध्रौं पटकसम्म आमरण अनशन बसिसक्दा पनि यो क्षेत्रमा सुधार आउन सकेको कुनै अनुभूति भएको छैन । बरु सरकारले तोकिदिएको मापदण्डलगायत कतिपय नीतिनियमको ठाडो उल्लङ्घन मात्र देखिन्छ ।
सामान्यतया अस्पताल भनेको रोग निदान हुने मन्दिर र चिकित्सकहरू भनेका एक प्रकारका भगवान हुन् भन्ने मानसिकता हामीबीच कायम रहेको छ । हुन त डाक्टरले सबै खाले रोगलाई छुमन्तर गरेरै निको पार्छन् भन्ने छैन । तर, तिनले मेडिकल साइन्सले सिकाएका तरीका र यन्त्रका माध्यमले सम्भव भएसम्म उपचारका विविध उपाय प्रयोग गर्छन् । समयमै रोगीले उपचार पाउँदा रोग बढी जटिल हुनबाट जोगिन्छ पनि । दुसाध्य भनिएका रोगहरूको निदान पनि समयमै सम्भव हुन्छ । यसैले डाक्टरी विद्या अरू विद्याजस्तो होइन र यो पढेर सफल चिकित्सक हुन धेरै समय लाग्छ । साथै अनुभवले पनि खारिएर उत्रनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि लगानी पनि थोरैतिनाले नपुग्ला । एउटा साधारण एमबीबीएस डाक्टर पढ्न चाहिने शुल्क मात्रमा पनि अथाह धनराशिको आवश्यकता पर्ने र नेपालमा कम्तीमा पनि ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिँदै आएको छ । देखिएको होइन, ५० लाख रुपैयाँभन्दा घटीमा त त्यो कोर्स पढ्न पनि नपाइने भइसकेको छ । सम्भवतः यही देखेर मेडिकल कलेज खोल्नेहरूको भीड लागेको मात्र होइन कि मेडिकल माफियाहरूले यसैका खातिर अनेक खाले बबण्डर मच्चाउने गरेका दृश्य सतहमै आइसकेका छन् । सरकारले मेडिकल कलेजको स्वीकृृति रोक्न पनि नसकिरहेको अवस्था देखिन्छ । झट्ट हेर्दा के लाग्छ भने यो क्षेत्रलाई माफियाहरूले नै चलाएका छन् र उनीहरूलाई कसैले पनि छुन नसक्ला । विचरा केसीको अनशनलाई कसले सुनोस् । यहाँनेर एउटा प्रश्न भने सधैं अनुत्तरित छ । त्यो के भने, नेपालका लागि यति धेरै मेडिकल कलेजको आवश्यकता छ त ? के न्यूनतम आधारहरूको समेत परिपालना गर्न नसकेका मेडिकल कलेजहरूलाई स्वीकृति दिनु उचित हो ? किन तिनको कठोर नियमन र अनुगमन हुँदैन ? के मानवीय स्वास्थ्यसित खेलबाड गर्न पाइने किसिमले डाक्टरहरूको उत्पादन लाइसेन्स दिँदैै जानु उचित हो ? हामीकहाँ जीवन रक्षा गर्ने संस्थाहरू खोल्ने इजाजत दिने प्रणाली नै पो गलत त छैन ? के यसलाई सरकारी नियन्त्रणभित्रै पार्न सकिन्न ? अहिले देखिएका मेडिकल कलेज खोल्ने कुरामा मात्र भाँडभैलो होइन, करोडौंको चलखेलमा एमबीबीएस प्रवेश परीक्षाका प्रश्नपत्रहरू बाहिरिने गरेका र नक्कली परीक्षार्थी बनेर प्रवेश जाँच दिइरहेका घटना पनि सतहमै आएका छन् । डाक्टरी पढिसकेर काम गर्ने लाइसेन्स दिने मेडिकल काउन्सिलमै पनि अनेक खाले भ्रष्टाचारका घटना बाहिर आउन थालेका छन् । बजारमा ‘क्वाक’ डाक्टरहरूको सेवाको बिगबिगी पनि भेटिएकै छन् । विदेशबाट पढेर आएका डाक्टरहरूको सेवाको अनुगमन पनि फितलै देखिन्छ । मेडिकल क्षेत्रमा देखिन थालेको यो भद्रगोल हर्दा के लाग्छ भने नेपालमा सरकार नामको कुनै उपस्थिति नै छैन र यो क्षेत्रमा कुनै कडा नियमन गर्ने निकाय पनि छैन । तिनको अनुगमनको त कुरै छाडौं ।
यो क्षेत्रको कुरा गर्दा अर्को बेथिति भएको फाँट हो निजी अस्पतालहरूले लिने मनपरी ढङ्गको शुल्क । सरकारी अस्पतालले लिने शुल्कभन्दा पचासौं गुणा बढी शुल्क लिन उनीहरूलाई छूट छ । उदाहरणका लागि सरकारी अस्पतालमा बिरामी जँचाउँदा ३० देखि ५० रुपैयाँ पर्छ भने निजीमा ५ सयभन्दा कममा जँचाउन सकिँदैन । अर्कोतिर, साधारण बिमारी हुँदा पनि हरेक प्रकारको टेष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी अस्पतालमा उपचार गराउन गइहालेको खण्डमा सानो रकमले नपुग्ला । यसैगरी त्यहाँ बस्नु नै पर्ने भयो भने पाँचतारे होटलको भन्दा बढी शुल्क क्याबिनको लाग्ने गर्छ । सामान्य आय हुनेले निजी अस्पतालको सेवा धान्नै सक्दैन भने अचेल सरकारी अस्पताल भनेका गरीब र विपन्नका लागि र निजी भनेका सम्पन्न र धनाढ्यका लागि मात्र हो भन्ने पर्न थालिसकेको छ । निजी अस्पतालले सरकारले तोकेको स्वास्थ्यकरका नाममा ५ प्रतिशत लिनुपर्ने भन्ने भए पनि तिनले १३ प्रतिशतको भ्याट पनि लिएकै देखिन्छ । अब यो कर भनेको सम्बन्धित अस्पतालले तिर्नुपर्ने हो कि बिरामीले ? । देशका नागरिक भएको नाताबाट बिरामीले स्वदेशका अस्पतालहरूमा सामान्य स्वास्थ्य उपचार गराँउदा पनि सरकारलाई कर तिर्नु भनेको ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ भनेझैं नै हो । यसैगरी निजी अस्पतालहरूले लिने सबै खाले सेवाका शुल्कको निर्धारणका बारेमा पनि न त सरकार नै गम्भीर देखिएको छ, न त सरोकारवाला निकाय नै । के यस्ता शुल्कका बारेमा सरकारले कुनै स्थायी निकाय गठन गर्न सक्दैन ? जसबाट हरेक वर्ष वा कुनै निश्चित समयपछि अनुगमन गरेर तिनलाई सामयिक सुधार गर्दै जान सकियोस् । निजी अस्पतालहरूले लिने गरेको मनपरी शुल्कका बारेमा सरकार अब गम्भीर बन्नैपर्छ र सबै निजी अस्पतालले कमसे कम समान शुल्क लिने परिपाटी पनि बसाल्नैपर्छ । नत्र महँगो शुल्क लिने राम्रा अस्पतालमा गनिने र कम शुल्क लिने नराम्रा अस्पतालमा गनिने गलत संस्कार शुरू भई नै सकेको छ । यसको नियमन र अनुगमन पनि कठोर र अनुशासित तरीकाबाट हुनैपर्छ । यो क्षेत्रमा देखिएको अर्को विकृति अस्पताल र तिनका सेवाका लागि हुने विज्ञापन पनि हो । मानवको जीवनसित सरोकार राख्ने विषय मेडिकल सेवा भएकाले यसलाई अन्य व्यापारिक उत्पादनको जस्तो गरी आमसञ्चारहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक तरीकाले विज्ञापन गर्नु कदापि उचित होइन । यतातिर अहिलेसम्म पनि सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन । यो क्षेत्र भनेको मूलतः मानवीय सेवाको क्षेत्र भएकाले र त्यो पनि जीवन रक्षासित हरबखत सरोकार राख्ने विषय भएकाले सरकार, निजी अस्पतालका सञ्चालक, चिकित्सकहरूले पहिले यो कुरालाई मनन गर्नैपर्छ, अनि त्यसपछि मात्र व्यापारिक चिन्तन जुन यसमा सहायक हो । कमसे कम अबको लोकतान्त्रिक युग प्रवेशका अवसरमा सङ्घीय, प्रादेशिक सरकारहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिँदै आएका माथि उल्लिखित विकृतिहरूलाई समयमै सुधारेर आमनागरिकलाई दिनुपर्ने स्वास्थ्य सेवाको गतिलो उदाहरण दिनसके भने लोकतन्त्र गणतन्त्रको अनुभूति पनि हुनेछ । के यतातिर सरोकारवालाहरूको ध्यान जाला त ?